ओलीलाई बामदेवले भने, ‘बिगार्ने तपाईँ हो, म यहाँ धेरैबेर बसेँ भने कुटाकुट पर्छ, म हिँडे !’ बालुवाटार भेटवार्ता — newsparda.com
ओलीलाई बामदेवले भने, ‘बिगार्ने तपाईँ हो, म यहाँ धेरैबेर बसेँ भने कुटाकुट पर्छ, म हिँडे !’ बालुवाटार भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित सचिवालयका ६ जनासँग बालुवाटारमा छुट्टै छलफल गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गर्दैगर्दा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ पुगेका थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपालले आफू निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यलाई भने अनुसार ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गाली गरेर संवादको सुरुवात गरेका थिए । ओलीले नेपालसँग सुरुवातमै भने, ‘के अब पार्टीलाई यस्तै बिजोग बनाउने, खत्तम पार्ने ? सिध्याउने ?’ ओलीले यसो भन्दासाथ नेपालले पनि थपे, ‘अहिलेको अवस्थाको सबैभन्दा जिम्मेवार तपाईं नै हो । तपाईंले पार्टीलाई विधिसम्मत चलाएर लैजानुभएको भए यो अवस्था आउँथ्यो ?’
नेपालको यो कुरा सुनेसँगै ओलीले रिसाएको भावसहित भने, ‘तपाईंहरु पनि खाली प्रचण्डको कुरो मात्र पत्याउनुहुन्छ । मैले चिठी पढिसकेँ । प्रचण्डको नियत के हो भन्ने पनि थाहा भइसक्यो । म जुनसुकै गठबन्धनको लागि तयार छु ।’
नेपालले पनि फेरि रिसाएको भावसहित भने, ‘यो धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्नुस् । अरुलाई धम्क्याउन सक्नुहुन्छ तर मसँग भुलेर पनि यस्तो वाक्य प्रयोग नगर्नुस् । म पदको लोभी छैन भन्न नछाड्ने अनि जहिले पनि पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने ? एउटा पदको लागि यति लालायित हुने तपाईँ ? यो अहंकार छोड्नुस् । दम्भ नदेखाउनुस् । विधि अनुसार चल्नुहोस् ।
आफूलाई मिल्नका लागि आग्रह गर्दा पनि पटक पटक प्रचण्डलाई गाली गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले अब फेरि जुधाउने कुरा सम्भव नभएको बताएका थिए । उनले ओलीसँग भने, ‘अब प्रचण्डजीलाई गाली गरेर होइन, विधि तथा प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । सुरुमा प्रचण्डसँग मिलेर हामीलाई पेल्ने तपाईँले अहिले प्रचण्डको गुनासो गर्ने ? अब फेरि जुधाउने कुरा सम्भव छैन । विधि र प्रक्रिया अनुसार तपाईँ चल्नुपर्छ,सच्चिनुपर्छ ।’
नेपालसँग छलफल गरिसक्ने बेलामा सचिवालयका अन्य नेताहरुसँग उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पनि त्यहाँ पुगेका थिए । प्रचण्डले बिगारे भनेर गाली गरेको सुनेपछि उपाध्यक्ष गौतमले कडा शब्दमा प्रतिवाद गरे ।
बामदेवले भने, ‘तपाईं नै हो यो सबै समस्या खडा गर्ने । तपाईंमा आत्मआलोचनाको कुनै शब्द छैन । प्रचण्डले त्याग गरेर सत्ता सञ्चालनको लागि आधा आधा गर्ने भनेकै हुन् । अध्यक्ष पनि पालैपालो गर्ने भनिएकै थियो । तपाईंले कहिल्यै मान्नुभयो ? उल्टै प्रचण्डलाई दोष दिनुहुन्छ ?
गौतमले अब ओलीको पछि नलाग्नेसमेत बताएका थिए । उनले ओलीलाई भने, ‘बिगार्ने तपाईँ हो । तपाईँको भुलभुलैयामा अब कोही पर्नेवाला छैन । म यहाँ धेरैबेर बसेँ भने कुटाकुट (झगडा पर्ने संकेत) पर्छ । म हिँडे ।’
वरिष्ठ नेता नेपाललाई फकाउने प्रयासमा लागेका ओली यो पटक साच्चै अप्ठयारो अवस्थामा पुगेका छन् । छलफलमा सहभागी एक नेताले ‘अरु रैती, आफू राजा’ जस्तो ओलीको कार्यशैलीकै कारण नेकपामा समस्या निम्तिएको हो ।